दश महिनामा पनि सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बन्यो नवील, कुनको कति ?(टेबलसहित) Bizshala -
दश महिनामा पनि सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बन्यो नवील, कुनको कति ?(टेबलसहित)
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा नवील बैंकले सबैभन्दा बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । कोरोना कहरको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि नवीलले आफ्नो नम्वर वानको पोजिसनलाई कायमै राखेको देखिएको छ।
नवीलले यो वर्षको सुरुवातदेखि नै नाफामा सबैलाई उछिन्दै आएको छ । यो क्रमलाई १० महिनासम्मको अवधिसम्म पनि कायमै राखेको देखिएको हो ।
विगतमा वर्षहरुमा वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै आकर्षक लाभांश वितरणको इतिहास बनाएको नवीलले बाँकी २ महिनामा औसत नै विजिनेश गर्दा समेत यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने क्षमता बनाउनसक्ने देखिन्छ । यहीकारण समेत नवील बैंकको सेयरप्रति दोश्रो बजारमा लगातार आकर्षण देखिँदै आएको छ । उच्च नाफालाई कायम राख्नु र लाभांश पनि अरुभन्दा बढी वितरण गर्ने भएकाले यो बैंकको दोश्रो बजार मूल्य प्रतिकत्ता रु. १३०० माथि छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार नवील बैंकले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात बैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा ४ अर्ब ५ करोड बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । वाणिज्य बैंकमध्ये नवीलको १० महिनाको नाफा सबैभन्दा बढी हो ।
खूद नाफा आर्जनको हिसाबले १० महिनाको अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंक दोश्रो स्थानमा छ । यो बैंकले ३ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ ।
यस्तै, ३ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन गर्दै एनआइसी एशिया बैंक यो सूचीको तेश्रो स्थानमा छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यो अवधिमा ३ अर्ब २७ करोड खूद नाफा आर्जन गरी चौथो स्थानमा पुगेको छ ।
बैशाख मसान्तसम्म ३ अर्ब १७ करोड खूद नाफा आर्जन गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक पाँचौ स्थानमा छ भने ३ अर्ब १२ करोड खूद नाफासँगै प्राइम बैंक छैठौं स्थानमा छ ।
यसरी हेर्दा बैशाख मसान्तसम्म ६ वटा वाणिज्य बैंकहरुको मात्र खूद नाफा ३ अर्बभन्दा माथि छ ।
राष्ट्रबैंकका अनुसार ७ वटा बैंकको बैशाखसम्मको खूद नाफा २ अर्ब माथि छ । एनएमबी बैंक २ अर्ब ७९ करोड नाफासहित सातौं स्थानमा रहेको छ भने नेपाल बैंक २ अर्ब ३९ करोड ५० लाखसहित आठौं स्थानमा, कृषि विकास बैंक २ अर्ब ३९ करोड २० लाख नाफासहित नवौं स्थानमा, सिद्धार्थ बैंक २ अर्ब ३४ करोडसहित दशौं स्थानमा, प्रभू बैंक २ अर्ब २९ करोडसहित एघारौंं स्थानमा, मेगा २ अर्ब २२ करोडसहित बाह्रौं स्थानमा छन् । सानिमा बैंक २ अर्ब ४ करोड खूद नाफा आर्जन गर्दै यो अवधिमा तेह्रौं स्थानमा रहेको छ ।
बैशाख मसान्तसम्म ११ वटा वाणिज्य बैंकको नाफा एक अर्बभन्दा बढी देखिएको छ । जसअनुसार कुमारी बैंकको १ अर्ब ९५ करोड, नेपाल बंगलादेश बैंकको १ अर्ब ८३ करोड, एभरेष्ट बैंकको १ अर्ब ७२ करोड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको १ अर्ब ६१ करोड, माछापुच्छ्रेको १ अर्ब ४५ करोड, हिमालयन बैंकको १ अर्ब ४० करोड, लक्ष्मी बैंकको १ अर्ब ३८ करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको १ अर्ब ३५ करोड, सनराइज बैंकको १ अर्ब २८ करोड, एनसीसीको १ अर्ब २४ करोड, बैंक अफ काठमाण्डू लिमीटेडको १ अर्ब १६ करोड रहेको छ ।
यो अवधिमा नेपाल एसबीआई बैंकले ९९ करोड ५० लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ भने सिभिल बैंकले ५३ करोड ३६ लाख र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ४३ करोड ७० लाख मात्रै खूद नाफा आर्जन गरेको छ ।
यसरी हेर्दा नवील बैंकले सबैभन्दा बढी नाफा कमाउँदा सबैभन्दा कम नाफा चाहिँ सेञ्चुरी बैंकले आर्जन गरेको छ । एसबीआई, सिभिल र सेञ्चुरीको खूद नाफा १ अर्बभन्दा कम छ ।
बैंकहरुले बैशाख मसान्तसम्म आर्जन गरेको खूद नाफा टेवलमा हेर्नुहोस्:
Nabil Bank Limited global ime bank limited rastriya baanijya bank limited net profit
नवील र एनसीसीले पनि तोके नयाँ ब्याजदर
काठमाण्डौ । बैंकिङ उद्योगको जाइन्ट बैंक नवील बैंक लिमीटेडले समेत...
एनआइसी एशियामा बचत खाता खोल्दा बैंकिङ उद्योगकै धेरै ब्याज
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको ३ बुँदे सर्कुलरपछि अधिकांश...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्टबैंकको निर्देशनपछि एनएमबी बैंक र सिटिजन्स...
एनआइसी एशियाको ब्याजदर पनि सिंगल डिजीटमा सीमित, बचतको अधिकतम
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडले पनि निक्षेपको ब्याजदर...
ग्लोबल आइएमईको पृथक प्रडक्ट:बचत खातामा मुद्दतिको प्रतिफल
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बचत...
अन्ततः सिंगल डिजीटमा झर्यो बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर, कुन
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको ३ बुँदे सर्कुलरपछि ब्याजदर युद्ध...
नेपाल बंगलादेश बैंकको नयाँ ब्याजदर: मुद्दति र बचतमा कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंकले संसोधित ब्याजदर प्रकाशित गरेको छ...
हिमालयन बैंकले घटायो ब्याजदर, अब मुद्दतिमा ९.३६% मात्र पाइने
काठमाण्डौ । कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर १२...